Kubwinya uye Kuzviisa Muhutano - Mutambo Wekuita
Kuita zvepabonde uye kutamba
Tsanga, tsvimbo, mufaro
Mune nguva apo zvinhu zvose zvinotenderwa uye hapana chinotyisa zvakare, zvinogona kuva zvakaoma kuti uwane uye unyanzvi hwekushushikana. Kuwedzeresa kwekugara kwakagadzirisa kwakaita kuti vanhu vazhinji vasave nekushushikana nekuita zvepabonde. Iyo inoshaya kufema kwezvakarambidzwa, kubva pane izvo zvekusangana pamwe chete zvakararama kamwechete.
Rudo, ruchiva uye - mutambo
Asi munhu muuchenjeri hwake ndiyo inokonzerwa nekugadzirisa maitiro nekuvandudza. Saka zvakakwanisawo kufema hupenyu hutsva pakuita zvekushushikana.
Iwe waifanira kutsvaga chimwe chinhu, asi iwe uchiri kuwana zvinhu zviduku kana zviduku uye izvo zvakapoteredzwa ne aura yekushamisa uye yakarambidzwa.
Hupenyu-hukama hwehukama huri kupfupika uye hupfupi, izvo zvingasadaro zvingave zvakakonzerwa nehutano hwakatotaurwa pamusoro pehupombwe.
Saka zviri kumurume nemudzimai kwete kungoona kubvumirana mumibvunzo yezuva nezuva, iyo munhu wese anogona kurarama zvakanaka, asiwo kuramba achidzoka uye kuzvitsanangura pachavo nenzira yepabonde.
Kazhinji kazhinji chinhu chitsva, kutaura.
Munhu wose ane fungiro, asi kwete kungofungidzira, asiwo mafungiro, mafungiro ezvokufungidzira anonyanya kutaura. Chimwe chinhu chisingazivikanwi kana krete inounza munhu anenge atova kufara, kana achingofunga nezvazvo. Kakawanda, kushuva kwekushushikana uku hakusi kuzadzika nokuti havatauri pachena uye zvinonzwisisika pamwe chete nemudiwa. Asi izvozvo hazvifanirwe kuva, nokuti kunyange uyo waanoita naye ane zvishuvo zvepabonde zvakavanzika, zvaanoda kurarama.
Iko mukana wevakaroorana pano kuti vabatsirane umwe neumwe chikwata pachavo kune imwe nzira inotevera yekusarura - uye haitore zvinopfuura kungotaura kwenguva pfupi.
Kazhinji, zvivande zvakavanzika zvisingawanzo ... asi ndiani anoda kuva akajairika? Hapana! Zvechokwadi, mamwe mafungiro akawanda kupfuura mamwe, asi ose akaenzana zvakakosha uye zvakaenzana zvakaenzana nekuedza.
Ushingi hwemutsva pano ndihwo chinhu chikuru
Vakawanda vakaroorana vanowanzoshamiswa nekushamisika kukuru kwavanogona kuwana mumitambo mitsva yekuita zvepabonde uye zvakasimba zvinoita kuti hupenyu hwepabonde hunogutsa huve nehupenyu hwezuva nezuva.
Kufungidzira kwakafanana zvepabonde kwevanhu vakawanda kunosanganisira kusungwa kwemarudzi ose. Uye iyo haisi yekuvandudzwa kwatsva. Yakave yakaratidza kuti kusungwa nezvimwe zvakadaro kuburikidza nehuwandu hwezvakaitika kare hwevanhu hwakange huchiratidzwa hunoita zvepabonde.
Kubwinya mune zvepabonde
MuMiddle Middle Ages pamwe chete neRoma yakazara yekare kana tsika dzekare dzeMesopotamiya, zvakanga zvisingashamisi kuwana chinhu chakakosha kuburikidza nehutapwa hwomukomana kana kuti kusungirirwa iye oga.
Nzira dzinosungira mumwe munhu dzakawanda kwazvo uyewo pane inogona kuunza mufaro mukuru.
Sekuve mutsva kunyika yenyika yekusungwa kwemasimba, iwe unofanira kunge wakaita nyore nyore pakutanga. Izvozvo hazvirevi kuti hazvigoni kuva zvesango! Mumwe chete anofanira kunge asingaiti pakarepo nemhepo yakazara mberi achiedza kupinda nyaya yacho, asi zvishoma nezvishoma anouya. Nokuti dzimwe nguva kushingaira kukuru kunogona kupedzisa kuedza kare-uye haufaniri kurega chimwe chinhu chinogona kunge chakanakisisa chaizvo chichinyadziswa nekuve chakashata. Mukunyarara pane simba.
Nzira yakanakisisa yekutanga kumba uye kune yakanakisisa yevese mubhedha. Nokuti bhedha yepamusha inowanzopa hutano hwakanaka hunoshandiswa. Mhemberero dzemakumbo, musoro nemakumbo zvinobatsira chete semakumbo emubhedha kana fomu.
Uyezve, kusarudzwa kwemasvikiro, uye iyo inoda kusunga muvengi wake inofanira kurongwa zvakanaka. Zvakanakisisa kukwira mukati nemamwe mavara. Chirafu chakanaka kana tambo yakadzika - chigadziko uye fanikiti zvicharamba zvichiine nguva gare gare (uye zvinodawo zvishoma kuedza).
Kwete zvakare mazamu akaoma pakutanga. Kunyangwe kana mumwe wacho achifanira kukumbira. Dzimwe nguva zvinowanzoitika kuti vatsva havazogoni kuzarura mazhenje ... kana vakashandiswa zvakanaka, vanogona kuvhomora mazano pavanenge vachiita. Ndicho chikonzero nei pasina chokwadi chakaipa nacho.
Ndiko kusaka zvakarurama pakutanga: Zvose zvinobvumirwa, asi usakurumidza chinhu!
Vamwe vanhu vanoita pfungwa yekushandisa simba pamusoro pevamwe, ngavave mumuviri kana mupfungwa. Vamwe vanhu, kune rumwe rutivi, vanosarudza pfungwa yekutungamirirwa nemumwe munhu - zvakare mumuviri uye mupfungwa.
Panogona kuva nezvikonzero zvakawanda zveizvi. Kazhinji vanhu vanozviisa pasi pepabonde muupenyu hwezuva nezuva vane hukuru hwevanhu, vane nzvimbo yakakosha mumakambani avo kana kuti mamwe maitiro akasimba. Ndizvo zvakare kune vanhu vane simba vanogona kunyara kunyara kunze kwekamuri. Iwe unogara uchitsvaka zvausinazvo - zvakare mumunda wepabonde.
Kutamba uye kutonga
I "minda yebasa" yekutonga uye vanozvipira inenge isingagumi. Kazhinji kambani dzakatotaurwa nezvehutambo hwemasungwa dzinoshandiswa kuratidza basa reumwe neumwe. Asi zvechokwadi zvinogona kuenderera mberi kupfuura "kururamisa" mitambo yeuranda.
Vamwe vanozvipira vanonzwa ruzivo rwakakosha pakuve nekurwadziwa kwepanyama. Kuti uite marwadzo aya, unogona kushandisa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana - ivai zviputi, zviputi kana kunyange mapoka kana mabhati. Vamwe vakaita sazvo zvakaoma kupfuura vamwe.
Asi kurwadziwa kwepfungwa hakusi kazhinji mumakamuri evanhu vakaroorana vane chido chekutonga mitambo. Nokutaura mazwi kana kuchenesa mafungiro epo ekutambudza kwepfungwa kunogona kukonzera maronda epfungwa mupfungwa ... Zvechokwadi, haasi kusingagumi uye ndeyekuda kwekuwedzera kufara panguva yechiito chacho.
Iwe unofanirwa kuchenjerera kuti urege kudarika. Pamberi pechiito chimwe nechimwe iwe unofanirwa kuita nemumwe wako unonzi "shoko rakachengeteka". Kana shoko iri rakachengetedzwa richinzi, zviito zvose zvinofanira kumiswa pakarepo uye pasina kukanganisa. Somugumisiro, sekuzviisa pasi, iwe unonyatsoziva kuti iwe haungatongorwi zvakanyanya.
Vamwe veterans vechiitiko vanoti mumwe munhu anofanira "kumira painova neropa", nevamwe, saka kunonakidza kwakakwana kunotanga. Ndiyo hurukuro yemunhu mumwe nomumwe apo munhu wose anofanira kuedza ivo pachavo. Hapana mutemo wepasi rose wekutambudzika kwakawanda kunofanira kuwanikwa kana kushandiswa kuitira hutano hwekushandisa zvepabonde. Asi inoramba ichi: Zvinhu zvose zviri muwandu.
Kuyananisa zvepabonde | zvepabonde
Soulsex | Kuita zvepabonde kunotyisa